Hal -abuurka Faallooyinka 7 -da Juun
Wow, ragga! waqti shixnad caaryada cusub !! Ha, Eeg sida ay ugu faraxsan tahay gabadhayada suuqgeynta! Hagaag, ka hor intaadan dhajin sawirkan, dhibaato ayaa qalbigayga ku dhibtooday. Saaxiibka leh xaddiyo aad u badan oo “linkedIn” ah ayaa i siin jiray talo naxariis leh: Haye, harry! ma wanaagsana in gabar lagu casuumo inay la istaagto m ...
Inta lagu jiro tijaabada caaryada, cilladaha wax -ka -beddelka ayaa badanaa dhaca iyada oo aan la saadaalin karin, sidaa darteed injineer tijaabinaya caaryada wanaagsan waa inuu lahaadaa waayo -aragnimo hodan ah si uu u xukumo sababta sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah, maaddaama kharashku sii kordhayo waqtiga lagu kharash -garaynayo mashiinka duritaanka. Halkan kooxdayadu waxay ku uruurisay xoogaa tijaabo ah ...
Akhristayaasha qaaliga ah, waxaan ka hadalnay qaybta naqshadeynta si loo xakameeyo caaryada ka -hor -dhaca ee maqaalkii ugu dambeeyay (Sida loo xakameeyo qalloocinta qaybta haanta hawada & biyaha? shaqo badan oo wax ka beddelid ah si loo habeeyo cabirka iyadoo loo eegayo ...
HaHa, nin ku hawlanaa warshadaha caaryada muddo 8 sano ah, waxaan haystaa wax badan oo aan "ka caban karo", midda koowaadna waa: Gabdho aad u yar oo nagu xeeran… waxaa laga yaabaa in shaqadu runtii aysan ku habboonayn quruxda. maadaama shaqo badan ay samada jirto, ...
Sida soo saaraha caaryada dhoofinta ee Shiinaha, Marka la barbardhigo caaryada gudaha, dhoofinta qiimaha caaryada ayaa si cad u sarreysa sanadihii la soo dhaafay, farqiga waxaa sababay heerka diffriend. Bulshada Maraykanka ee Warshadaha Caagga ah (SPIAN-102-78) ayaa caaryada u qaybisa shan qaybood. Shanta nooc ee caaryada ayaa ...
1, Naqshadeynta wax-u-beddelidda ayaa ah furaha ku saabsan hawo-mareenka & haanta biyaha caaryada caagga ah, xakamaynta tayada ee naqshadeynta iyo wax-soo-saarku way ka adag tahay nooca caadiga ah, maaddaama qaybaha noocan ah ay caadiyan qaabaysay maaddada PA6 (PA66) + GF (30-35%) xarunta, iyo mater-ka noocan ah ...
May 15-keedii, 2017- shixnadaha shixnadaha Dhowr bilood oo aad loo shaqeynayay ka dib, caagag raashin ah oo ka kooban qoys (raashin-sanduuqyo) ayaa loo diray macmiilka. Maaddaama qaybaha ay yihiin kuwo hufan (sida sawirka kore ka muuqda), macaamilkuna wuxuu leeyahay shuruud heer sare ah muuqaalka qaybaha. Kooxdayada injineernimada wax badan bay qabteen si ay u guulaystaan ​​...
1. Ujeedada tijaabada caaryada? Inta badan cilladaha la sameeyay ayaa dhacay inta lagu gudajiray badeecada caagaynta iyo habaynta wax -ka -beddelka, laakiin mararka qaarkood waxay la xiriirtaa naqshada caaryada ee aan macquul ahayn, oo ay ku jirto tirada godadka; naqshadeynta nidaamka orodka qabow / kulul; nooca, booska iyo cabbirka duritaanka ...
-Safarka Dooxada Caafimaadka Gu'ga Kuleylka ee Nankunshan Roobab ayaa da'aya maalmo mana garanayo in gu'gii dhammaaday. Marka cimiladu hagaagto, waxaan garwaaqaa in xagaagii yimid wakhti dheer. Waqtigu had iyo jeer wuxuu ku jiraa marinka aan ku talagal ahayn, kalandarka 2019 waxaa la rogay bishii Juun, iyo summad kulul ...
Erayada waa inay daacad noqdaan, maadaama balanku yahay deyn！